Madaxweyne Siilaanyo Oo Maanta Soo Kormeeray Xarunta Ka Hortaga Cudurka HIV/ADIS, Kana Hadlay Qaabka Looga Hortagi Karo (Daawo Sawirada) | Salaan Media
Madaxweyne Siilaanyo Oo Maanta Soo Kormeeray Xarunta Ka Hortaga Cudurka HIV/ADIS, Kana Hadlay Qaabka Looga Hortagi Karo (Daawo Sawirada)
Aug 25 2013 Hargeysa(SM)- Waxaa Somaliland qofkii u horeeyey lagu arkay xanuunka AIDska sanadku markuu ahaa 1992-kii. Sidaa darteed, waxa daruuri noqotay inaynnu ula dagaallano si la mid ah sida bulshooyinka Caalamku ula dagaallamayaan.
Dawladda Somaliland waxay xil weyn iska saartay si walba oo xanuunkan wax looga qaban karo, iyadoo aasaastay komishan Qarankeenna u qaabilsan wax-ka-qabashada iyo la dagaallanka xanuunkan.
Somaliland ahaan si aynaan u gaadhin heerka loo yaqaan “marxaladda uu xanuunkani baahsanyahay” iyadoo nasiib wanaag aynu joogno marxalad aanu baahin oo wax laga qaban karo, waxaa lagama maarmaan ah in aynnu Dhammaan awoodda isugu gayno wax ka-qabashada xanuunkan.
Haddaba, markii aan ogaaday in uu jiro culays maaliyadeed oo ku soo kordhay Global-Fund-ka oo ah Hay’addii Somaliland iyo waddamo badan oo dunida ka mid ah ka caawin-jirtay dhinaca dhaqaalaha, waxaan jeclaystay in aan Maanta baaqan u diro bulshada Somaliland iyo Beesha Caalamka guud ahaan kaas oo ku wajahan sidii aynnu gacan buuxda u siin lahayn Komishanka Qaranka ee Xakamaynta AIDs-ka sidii loogu horjoogi lahaa shanta sano ee soo socota heerka ugu hooseeya ee aynnu gaadhsiin karno, intaa wixii ka danbeeyana aynnu ka faraxalanno xanuunkan.
Anigoo ka duulaya arrimaha aan kor ku soo xusay isla markaana tix-gelinaya inaan komishanku helin taageero ku filan hadday tahay dawladda Somaliland iyo dhinaca hay’adahacaalamiga ah ee u xil saaran wax-ka-qabashada xanuunkan, isla markaana hay’adihii Komishanka ka kaabi jiray ay aad u yareeyeen taageeradoodii.
Anigoo Maanka ku haya xilka qarankan iga saaran isla markaana ah Guddoomiyaha Komishanka Qaranka ee Xakamaynta AIDs-ka (SOLNAC) waxaan rabaa in aan bulshada reer Somaliland iyo ta caalamkaba u muujiyo sida aan diyaarka ugu ahay qof-ahaan iyo Xukuumad ahaanba inaan qaybta ugu weyn ka qaato la dagaallanka iyo wax-ka-qabasahda xanuunka AIDs-ka.
1. Waxaan Miisaaniyadda Qaranka ee 2014-ka ugu daraynnaa annagoo ka duulaynna awooddeena dhaqaale inta ugu badan ee suuro gal ah, waxna lagaga qaban karo dedaalka aynu ugu jiro la-dagaallanka xanuunkan AIDS-ka si sannadkan tallaabooyin muuqda loo qaado.
2. Waxan fududaynaynaa sidii loo Gaadhi lahaa dhammaan Gobollada iyo degmooyinka Somaliland gaar ahaan kuwa halista badan laga filan karo si loo helo xog sugan oo waddanka oo dhan ah.
3. Waxan farayaa Wasaaradda Warfaafinta, Wacyigelinta iyo Dhaqanka inay Idaacadda iyo TV-ga qarankaba ka siiso waqti ku filan ka-wacyigelinta bulshada xanuunkan, gacan buuxdana ka siiso Komishanka Qaranka ee Xakamaynta AIDs-ka.
4. Waxaan farayaa Wasaaradda Dib-u-dejinta iyo cidkastoo awood u lehba inay Mucaawinooyinka dalka soo gaadha si muuqata uga taageerto dadka la nool xanuunka HIV/AIDs-ka sidii horeba Xukuumaddu u samaysay.
5. Waxan farayaa Komishanka Qaranka ee Xakamaynta AIDs-ka iyo saaxiibbadooda kala shaqeeya hawshan inay ku dhiiri-galiyaan oo u sheegaan dadka in aanay ceeb ahayn in la iska baadho xanuunka, taasoo loo baahan yahay in ay hormood ka noqdaan Madaxda Dawladda, Culimada, Aqoonyahanka iyo Ganacsatada waaweyn.
6. Waxan ka codsanayaa ganacsatada reer Somaliland inay gacan ka gaystaan wax-ka-qabashada xanuunkan cid waliba qaadi karto isla markaana ay caawiyaan walaalahooda la nool xanuunkan.
7. Waxan ka codsanayaa hay’adaha caalamiga ah ee ku shaqada leh wax-ka-qabashada xanuunkan inay laban-laabaan dadaalka iyo kaalmada ay ku bixiyaan la-tacaalista xanuunkan. Waxaan idinka rajaynayaa in aad iskaashi iyo wada shaqayn buuxda ka yeelataan hay’adda ku shaqada leh ee qaranka u qaabilsan.